2016 – Puntland News
War degdeg ah: Akhriso: Isimada Sool, Sanaag iyo Cayn oo go’aan culus ku dhawaaqday goor dhowayd kanasoo horjeestay heshiiskii dhexmaray….
December 31, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
War degdeg ah Dowladda Turkiga oo Muqdiso war ku saabsan arrimaha Puntland kadib markii madaxeyne Gaas uu la kulmay…
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Muqdisho danjiraha Dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya. Kulankan oo kadhacay xarunta safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa madaxweynaha iyo danjire Oglan Bekar kaga wadahadleen arrimo…
December 31, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 3
War degdeg ah: taliye ku xigeenka madaxtooyada oo goor dhowayd lagu dilay Muqdisho.
Waxaa Goor dhaw Madaxtooyada Soomaaliya lagu dilay Taliye Kuxigeenkii Ciidanka Madaxtooyada Soomaaliya oo Lagu Magacaabi jiray Qoorgaab,waxaana dilay sida ay noo Xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya mid kamida Ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya. Ujeedka uu Askarigu u dilay Allaha u naxaristee…
War degdeg ah: Xildhibaanada Beesha Leelkase oo Muqdisho kaga dhawaaqay go’aan midaysan iyo cida ay dooranayaan.
Xildhibaanada Beesha leelkase ee Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Maanta Muqdisho kag dhawaaqay inay go’aan midaysan ku qaateen sidii beesha aragti midaysna uga yeelan lahayd cida Soomaalya u matalaysa masiirkeeda madaxeed. Shirka ayaa Waxaa kasoo qaybgalay Wasiirka Waxbarashada iyo…
DHEGEYSO-War deg deg ah oo hadda nasoo gaarey iyo 27 gaari oo inta u dhexaysa Xarfo iyo Galkacyo…
Wararka naga soo gaaraya degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaasi ay kusugan yihiin ilaa 27 kamid ah gaadiidka xamuulka qaada oo ka cabanaya canshuuro aysan horay u bixin jirin oo dhanka Boosaaso lagaga soo rogey. DHEGEYSO
December 31, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 1
War deg deg ah-Barlamaankii cusbaa oo is-haysta qodobo laysku mari la’ayahay+Khilaaf…
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo shir ku leh xarunta Golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn kaga doodaya qodobo muhiim ah oo horyaala Baarlamaanka. Shirkaan oo ah kii ugu horeyay oo ay yeeshaan Xildhibaanada dhawaan la dhaariyay ayaa ka doodaya…
War deg deg ah oo hadda nasoo gaarey iyo gudoomiye degmo oo iskuday dil ka badbaadey.
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin uu ka badbaaday isku day dil, kadib markii qarax lala eegtay gaari uu watay. Gaariga Guddoomiyaha ayaa maraayay inta u dhaxeysa…
War degdeg ah: Ciidanka amniga Puntland oo gacanta ku dhigay labo qof oo faafinayay…..
Garowe 31 December:- Ciidamada amniga Puntland ayaa gacanta ku dhigay labo qof oo kala ah qof dumar ah iyo qof rag ah, kuwaas oo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ku faafinayay cudurka dilaaga ee AIDS-ka. Hay’adda la dagaalanka AIDS-ka Puntland…
War cusub-Gaadiid la-aaminsan yahay in qaraxyo saarnaayeen oo markii ugu horeysey lagu qabtay magaalada…
Wararka laga helayo Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay howlgallo xoogan ka sameeyeen qeybo ka mid ah Xaafadaha Degmada Afgooye. Howlgalladan ayaa daba socdo weerar habeen ka hor halkaasi ay ku soo qaadeen…
War deg deg ah-Xaaladda oo ka duwan sidii hore iyo xaasad dagaal oo saaka ka aloosan magaalada…
Maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa lagu soo waramayaa in uu soo kala dhex galay Khilaaf xoogan kadib markii ay isku qabsadeen qeybsiga Wasiiro uu yeelanayo Maamulkaasi. Khilaafkan ayaa waxuu soo kala dhex galay Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ahlu Sunna, Saadaq…
Sawirro-Dalxiisayaal Cadaan ah oo cararaya iyo diyaarad kusoo dhacday xeebaha bariga gobolka…
Dalxiisayaal fara badan ayaa ku kala cararay xeebta magaalada Teneriffa Dalka Spain gaar ahaan dhanka loo dalxiis tago ee Santa Cruz ka dib markii goobtaas Duuliye jahwareesan uu ku soo dajiyay Diyaarad yar . Shacabkii ku dubaalanayay xeebta Teneriffa ayaa…
Breaking news-Ciidanka AMISOM iyo Galmudug oo duulaan ku qaadaya fariisimada ciidanka maamulka…
Sida ay sheegeen saraakiisha maamulka gobolada dhexe ee Ahlusuna Ciidamada Jabuuti iyo kuwa Galmudug ee ku sugan Cadaado ayaa weerar kusoo qaadaya dhowaan Degaanada ay hadda Maamulaan. Idaacad ku hadasha Afka Maamulka oo ka taala Dhuusamareeb ayaa laga baahiyay in Ciidamo ka…
Daawasho Xasaasi ah-Musharax Farmaajo iyo Musharaxa Somaliland Cabdiraxman Cirro oo isla meeldhigay midnimada Soomaaliya.
Musharaxa xilka madaxtinimada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inay C/raxmaan Cirro isla meel dhigeen Midnimada Soomaaliya, ayna kawada hadleen Danta Soomaaliya, Isagoona intaa ku daray haddii la doonayo in Soomaaliya hormar gaarto dhinac kasta laga midoobo. Sidoo…
War deg deg ah-dhegeyso maamulka gobolka Mudug oo war ka soo saaray dagaalkii Dudun kuna dhawaaqay..
Gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif (Abgaalow), ayaa sheegay in xabaad joojin laysku afgartay wixii qalad ahna xal kama dambays ah laga gaari doono, kadib dagaal dhowaan Puntland iyo DDSI kudhexmaray deegaanka Dudun. DHEGEYSO
Daawo digniin culus oo aan dhayalsi lahayn: Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf: “Saxaafadu waxay dagaal adag ugu jiraan inay dadka muslimiinta ah diintooda iyo aqlaaqdooda ka badelaan waxaana la joogaa xilligii la iska qaban lahaa.
Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo kamid ah culimada sida weyn looga yaqaano deegaanada Puntkand ahna gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika faraceeda Garowe, ayaa si kulul u wareeray warbaahinta Soomaalida, isagoo ku tilmaamay inay yihiin dagaal ugu jiraan in ay cid walka ka…
War degdeg ah: Alshabaab u hanjabtay ganacsatada magaalada Bosaso iyo ilaaladooda
Muqdisho 20 December:- Kooxda argigixisada ee Alshabab ayaa soo saartay waxay ugu yeereen digniin ay ujeedinayaan ganacsatada magalada Bosaso iyo ilaaladooda gaarka ah, sida uu sheegay ninka afhayeenka howlgallada uqaabilsan Alshabab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab. Digniintaan ayaa maleyshiyda Alshabab…
December 30, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 4
War Deg-Deg Ah: Email-ladiii Faysal Cali Waraabe Oo La Jabsaday Iyo Siraha Loogu Tagay.
Shabakadda Qarannews oo ah warbaahin laga leeyahay Somaliland ayaa gacanta ku dhigtay xogta todobadii sanno ee ina dhaaftay, oo uu leeyahay mid ka mid ah shakhsiyaadka ku jira siyaasadda Somaliland ee maanta. Eng Faysal Cali Xuseen, oo aad logu yaqaano…
December 30, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 5
Ex-Xildhibaan Cabdi Barre: Puntland khatar weyn ayaa soo waajahdey haddii aan laga badbaadin.
Puntland waxay noqotay laan gebi ka lulatay oo duufaani ligligayso, haddaan dadkii dhistay cayminna waa la isweydiin doonaa. Waxay Puntland eersatay oo isug isugu darsamay aafo shan-madaxley ah: ⦁ Hoggaan-xumo iyo siyaasad majaro-bawdey oo ay seegtay meekhaankii iyo miisaankii ay…
December 30, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 1
Breaking News: Beesha caalamka oo soo saartay warsaxafaadeed lagu taageerayo go’aankii lagu joojiyay…
Beesha Caalamka ayaa waxa ay ka hadashay Go’aankii 29-kii Bishan ka soo baxay Madasha Wadatashiga Qaran, kaas oo ku aadanaa in dib loo dhigay Doorashada 18-ka kursi ee lagu kordhiyay xubnaha Aqalka Sare ee Dalka. Saaxiibada daneeya arrimaha Soomaaliya oo ay…
December 30, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
War degdeg ah: Beesha reer Maxamuud oo Gaalkacyo uga dhawaaqday go’aan culus kuna baaqday in Isimada Puntland si degdeg ah uga tashadaan xaalada Puntland ee haatan.
Beesha Maxamuud Ibrahim ee loo yaqaano reer Maxamuud oo kamid ah beelihii wax ka dhistay dowladda Pumtland sanadkii 1998, ayaa magaalada Gaalkacyo kaga dhawaaqay go’aan degdeg ah oo ay ka qaateen xukuumada madaxweyne Gaas oo ay ku eedeeyeen cadaalad darro iyo…
Daawo: Arrin la yaableh oo maanta ka dhacday guriga madaxweynihii hore Puntland Faroole.
Magaalada Garowe waxaa maanta jimco ah ka dhacday arrin la yaab ah kadib markii guriga madaxweynihii hore ee Puntland ay iskasoo gashay Qaali yar oo geel ah oo aan cidina wadin. Qaalintaan oo ekayd mid baadiyaha kasoo xarootay abaarta aygeed, ayaa…
War deg deg ah oo hadda naga soo gaarey Boosaaso…
War deg deg ah oo hadda aan ka helnay magaalada Bosaso ee xarunta Ganacsiga Puntland ayaa sheegaya in laga sugayo madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana dhaqdhaqaaq dhanka ammaanka ah laga dareemaya wadada gasha garoonka Boosaaso iyo guud…
XOG-Isbedel iyo Isku shaandhayn lagu samaynayo xukuumadda Puntland+Loolan ka socda Garoowe.
Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa siweyn looga hadalhayaa isku shaandhayn iyo isbedel lagu sameeyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Bilowga bisha January ee sanadka 2017 ayaa lafilayaa inuu dhoco isbedelkaasi, waxaana magaalada ka socdo dedaalo…
War deg deg ah-Go’aankii ugu cuslaa oo hadda masjid Garoowe kuyaal looga dhawaaqay+Dagaal Kadhan ah.
Mid kamid ah masaajiddada magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa khudbaddii Jumacada siweyn loogu gorfeeyey dilalka qorshaysan ee kadhacayey Boosaaso iyo sida diinta Islaamku uga hortimid dilka qofka Islaamka ah ee Ashahaadada qiray. Khudbadda Jumacada oo ay soo xaadireen…
December 30, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 3
Dhegeyso-Warar naga soo gaaraya xeebaha bariga gobolka Nugaal iyo Maamulka Gobolka oo ku dhawaaqay…
Wararkii ugu dambeeyey ee aan kahelayno xeebaha Bari ee gobolka Nugaal ayaa sheegaya in deegaamadaasi ay isugu tageen bolaal qoys oo reer guuraa ah kana kala yimid ilaa deegaamada Soomaaliland. Gudoomiye ku-xiegenka gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi oo lahadlayey warbaahinta…
Akhriso-Heshiis hordhac ah oo Puntland iyo DDSI ku gaareen Dudun+Wararkii ugu dambeeyey.
Shirkii Dudun ka socday ayaa soo gaba gaboobay goor dhawayd, waxaana Puntland iyo Ethiopia ku Heshiiyeen sadex qodob, oo kala ah: In xabadda la joojiyo In wafdi balaaran oo kawada hadla arinta xuduudda labada dhinacba keenaan In qolo walba meesha ay…
War deg deg ah-dhegeyso Puntland oo ka hadashay sababta uu u dhacay dagaalkii Dudun iyo Khasaaraha.
Gudoomiye ku-xiegeenka degmada Gal-dogob Mudane Cabdirisaaq Axmed Toox-yare, ayaa sheegay in dagaalkaasi uu bilowday kadib markii ciidanka DDSI ay dejiyeen calankii Soomaaliyeed, islamarkaana ay sureem calanka Itoobiya, taasi oo keentay in ciidanka Puntland ku baxaan. DHEGEYSO
Sawirro: War degdeg ah: Gaadiid Saad u waday Alshabab oo gacanta lagu dhigay.
Ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee ku sugan Gobolka Gedo, ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen gaari sida la sheegay siday direes iyo dawooyin loo waday Ururka Al Shabaab. Saraakiisha Ciidamada ayaa shegay gaarigan in laga shakiyay markii uu maraayay Degmada…
December 29, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
War deg deg ah-Kulamo xasaasi ah oo Dudun uga socda Puntland iyo DDSI+Arrimo xasaasi ah oo…
Wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaarada deegaanka dawlada Puntland Mudane Cali Cabdulaahi Warsame oo saaka u amba baxay deegaanka Tuulo Xanaan oo shalay Xiisad coladeed kasoo cusboonaatay ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo. Wasiirka deegaanka iyo gudoomiyaha gobolka koox xildhibaano ah oo…
Dallada dhalinyarada Puntland ee PYAN oo ka badbaaday iskuday lagu burburin lahaa. SABAB?
Garowe 29 December:- Wasaaradda shaqada, shaqaalaha iyo dhalinyarada Puntland ayaa ku fashilantay iskuday ay ku doonaysay inay ku burburiso dallada dhalinyarada Puntland ee PYAN, oo la aas aasay sanadkii 2015. Warbaahinta Puntlandnews oo soo xiganaysa xubno kamid ah Boodhka Pyan…
© 2018 Puntland News. All rights reserved.
Powered by Puntlandnews.net· Designed by Kooxda.com